Dos uye Zvisingaitwe Zvemukati Kushambadzira | Martech Zone
Dos uye Zvisingaitwe Zvemukati Kushambadzira
Muvhuro, September 30, 2013 Chipiri, Gunyana 1, 2013 Douglas Karr
Zvakanaka, heino kuseka kwako kwemasikati. Uchishandisa Meltwater Buzz, isu takangoona iyi yakapusa uye yakanaka infographic ichipa yakanaka yekutarisa zvinhu izvo munhu angangoda kuisa mupfungwa kana achigadzira yavo yemukati yekutengesa zano.
Mumwe wemitemo maererano nekublogi ndeye Usashambadze rakanyoreswa blog. Ndakaona kunyorwa kwakaipa kwakawanda (kubva pamusoro wenyaya, kutaura maonero sezvazviri, kusanzwisisa) kuchine girama yakanaka uye chiperengo, saka ndinotenda zvavaireva zvaive blog isina kunyorwa. Zvangu zvinyorwa zvinowanzo nyorwa zvisirizvo… asi ini ndinofunga ivo vachiri nezvakakosha zvemukati mechikamu chikuru… vakarurama vema grammarians uye orthographers? Mune mawonero angu, kukosha kwezvako zvemukati kunorova kunyatso kunyorwa. Ndiwo chete maonero angu nekuti ini ndinoyamwa pagirama uye chiperengo, zvakadaro.
Dai ndaizo gadzira chimiro chekuti zvese zvemukati zvako zvinofanirwa kunyorwa nemazvo, ini ndinogona kunge ndine dambudziko chairo neiyi infographic. Iyo infographic inonzi iyo Do's uye Dont's Zvemukati Kushambadzira. Kunyangwe kusaziva kwangu kunotyisa kweChirungu kwakaita kuti ndiite zvakapetwa kaviri mumusoro. Haifanire kunge iri iyo Dos uye Zvisingaitwe Zvemukati Kushambadzira?
Nzvimbo dzeZvaunodana Kuti Uite
Wedzera: Kuziva, kuwedzera, kuyera, kugadzirisa, kutonga
Gumiguru 1, 2013 pa 9:23 AM
Anoshamisa matipi Doug! Iwe wakaroverera zvakare .. ini ndaive neyakanyanya kuverenga. .. Ndatenda nekugovana!
Gumiguru 3, 2013 pa 7:25 AM
Hei Douglas, ndatenda nekugovana. Iyo yakanaka kwazvo infographic, ine akawanda anobatsira matipi. Handisati ndambocherechedza typo mumusoro, kusvikira ndaverenga maonero ako mutsamba 🙂 Uye iwe wakarurama, inofanira kuva "Dos".